शेरबहादुर देउवालाई रवीन्द्र मिश्रकाे चेतावनी : जेलमा बसेर टेलिभिजन हेर्नुहाेला – Khabar Silo
काठमाडौँ । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जेलमा बस्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।काँग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमको पक्राउलाई काँग्रेस विरुद्धको षडयन्त्रको रुपमा व्याख्या गरेपछि मिश्रले देउवालाई त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा देउवाको सो समाचार शेयर गर्दै मिश्रले लेखेका छन्, ‘जे पनि भन्दिने, जे पनि गर्दिने ? मानवता विरुद्धका अपराधीहरू, अपराधीलाई जोगाउनेहरू, भ्रष्टाचारी र देश दोहनकारीहरू, पर्खिनोस्, जनमत बदलिँदै छ ।’
मिश्रले अगाडि लेखेका छन्, ‘अब धेरै वर्ष लाग्दैन । साझा पार्टी नेतृत्वमा आएपछि सुशासन भनेको कस्तो हुन्छ जेलमा बसेर टेलिभिजनमा हेर्नुहोला ।’
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न बनाउन लागिएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोपमा सांसद मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेसले त्यसलाई काँग्रेसविरुद्धको षडयन्त्रको रुपमा अर्थ्याएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँको एक कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेस सभापति देउवालाई आलमको पक्राउ काँग्रेसविरुद्धको षडयन्त्र भएको बताएका थिए । पुरानो मुद्दालाई ब्युँताएर सरकारले नेपाली काँग्रेसविरुद्ध घेराबन्दी र षडयन्त्र गरेको उनको आरोप थियो ।
सोही कार्यक्रममा घटनाको बखत गृहमन्त्री समेत रहेका अर्का काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत आलमको पक्राउलाई काँग्रेसविरुद्धको ग्य्राण्ड डिजाइनका रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
काठमाडौं । तनहुँमा आइतबार कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालमाथि भएको आक्रमणलाई लिएर कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपाका नेता योगेश भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ । कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका शर्माले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री समेत रहेका भट्टराईलाई तीतो नबोल्न सुझाव दिएका छन् । भट्टराईले कांग्रेसलाई इंगित गर्दै अराजकताको घोडा चढ्न नसुहाउने टिप्पणी गरेपछि शर्माले […]
संसदमै उठ्यो प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग, खुमलटारमा उथलपुथल !
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी सांसद हीरादेवी गुरुङले पाँच हजार मान्छे मारेको हुँ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई किन कानुनी दायरामा नल्याइएको भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा, केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले युद्धकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै यो प्रश्न उठाएकी हुन् । दाहालले पाँच हजार आफूले र […]
ज्वाँइलाई भन्दा ससुरालाई पछ्याउने बढि